dtpicker - MYSTERY ZILLION
September 2014 edited September 2014 in VB6
date နှစ်ခုခြားနားချက်ကို ရှာတဲ့အခါမှာ
result က ရက်ပေါင်းတွေပဲရတယ်ဗျ
ဥပမာ ရက်ပေါင်း (၁၀၀၀)ရတယ်ဆိုရင်
ရချင်တဲ့ result ပုံစံ က နှစ်၊လ၊ရက် ပုံစံရချင်ပါတယ်ဗျ
နှစ် လ ရက် က တွက်ရင်တော့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြေအတိ ကျ ထွက်ဖို့ ခက်တယ်။
၁ ရက် ဟာ 0.0328549 လ နဲ့ ညီတယ်။
တနည်းဆိုရင် ၁ လမှာ 30.4368 ရက် ရှိတယ်။
ဒါကြောင့် အတိ အကျ တွက်လို့ မရဘူး။
1000 ကို 30.4368 နဲ့ စားရင် 32 လ 26.0224 ရက် ရမယ်။
32 လ ဆိုတော့ ၂ နှစ် နဲ့ ၈ လ။
ဒါကြောင့် ရက် ၁၀၀၀ ဆိုတာက ၂ နှစ် ၈ လ ၂၆.၀၀၂၄ ရက် နဲ့ ညီတယ်။
var days = 1000;
var month = Math.floor(days / 30.4368);
var n_days = days - (30.4368 * month);
console.log("DAY " + n_days);
var year = Math.floor(month/12);
var n_month = month - (12 * year);
console.log("Month " + n_month);
console.log("Year " + year);
VB6မှာ floor ကို Math.Floor နဲ့ ခေါ်တယ်နဲ့တူတယ်။
vb6 မှာတော့ Fix (days / 30.4368) သုံးလိုက်တာ
သင်္ချာ မှာ Floor နဲ့ Ceil ဆိုတာ ရှိတယ်။ UCSY က ဆိုရင် second year လောက်မှာ သင်တယ်နဲ့ တူတယ်။
Floor ဆိုတာကတော့ 30.9 ဖြစ်နေရင်တော့ 30 ကိုပဲ ယူတယ်။
Ceil ဆိုတာကတော့ 30.1 ဖြစ်နေရင်တော့ 31 လို့ ယူတယ်။
Fix ကတော့ 30.5 ဖြစ်မှ 31 လို့ ယူတယ်။ 30.1 ဖြစ်နေရင် 30 ကို ယူတယ်။
ကိန်းပြည့် ရချင်လို့ ယူတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စားလဒ် ကိုပဲ ယူချင်တယ်။ ဒါကြောင့် Floor ကို သုံးတာပါ။
ဥပမာ ၅ ကို ၂ နဲ့ စားရင်
စားလဒ် က ၂ အကြွင်း ၁ ဆိုပြီးလိုချင်တယ်။
Computer မှာက 5/2 = 2.5 ဆိုပြီး ထွက်လာမယ်။ စားလဒ် ကို လိုချင် လို့ Math.floor ပြန်သုံးထားတာပါ။
ကျွန်တော် vb6 မှာဒီလိုစမ်းကြည့်ပါတယ်ဗျ
result က3ပဲရတယ်ဗျ ဘယ်ဟာကိုသုံးသင့်လဲဆိုတာပြောပေးပါအုံး
vb6 မှာ math.floor ကတော့မတွေ့ဘူးဗျ math.abs/ath/cos/exp/log/randomize/rnd/round/sgn/sin/sqr/tan တွေပဲ
တွေ့တယ်ဗျ အကုန်စမ်းကြည့်တော့ math.round ကတော့ (3.66) ဆိုရင်4ဖြစ်သွားတယ်ဗျ
''Int and Fix functions''
The required numberargument isaDouble or any valid numeric expression. If numbercontains Null, Nullis
Both Intand Fixremove the fractional part of numberand return the resulting integer value.
The difference between Intand Fixis that if numberis negative, Intreturns the first negative integer less than
or equal to number,whereas Fixreturns the first negative integer greater than or equal to number.For example,
Intconverts -8.4 to -9, and Fixconverts -8.4 to -8. ^:)^
ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်လိုက်မှ Floor ကို VB6မှာ က Fix ဖြစ်ပြီးတော့ VB.NET မှာ မှ Math.Floor ပါတာ။